Labada Shariif oo mar 3-aad kulmay, kuse kala kacay fadhigii. – Radio Daljir
Maajo 21, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, May 21 – Waxaa maanta markii 3-aad todobaad gudihi kulan isugu yimid M/weynaha iyo Afhayeenka baarlamaanka ee dawlada federaalka ah ee Somaliya Sh. Shariif iyo Shariif Xasan.
Xil. Cumar Islow, xog-hayaha baarlamaanka, kana mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirka, oo la hadlay saxaafada shirka kadib ayaa sheegay in aan wax natiija ah ka soo bixin kulankii maanta, kuna tilmaamay in uu ahaa waqti lumis.
Md. Islow waxaa uu sheegay in sida keliya ee xal lagu gaar karaa ay tahay iyada oo sharcida loo hogaansamo, lana tixgeliyo go’aamada baarlamaanka.
“Weli waxaa la kala taagan yahay hal sano ha la iigu daro, iyo doorasho ayaa dalka ka dhici doonta” ayaa uu yiri Xil. Islow.
Sida aan ka soo xiganay ilo ku dhaw labada dhinac ayaa isku af-garan waayey qodobadii wada-xaajoodka, kuna kala kacay fadhigii. Dhinac kastaa waxaa uu la yimid tiro dalab ah oo ula ekaatay kan kale wax aan la liqi karin. Ka sokow doorasho ha dhacdo, iyo xil-korosi ayaan u baahnahay, waxaa jira dalabaad dhinac kastaa uu ku gorgortamayo, illaa iyo hadana waxaa la sheegay in Shariif Xasan iyo xulufadiisu ay miiska la yimaadeen dalabaad uu masuugay Sh. Shariif inta aanba la isla gaarin dalabaadkii Sh. Shariif iyo xulufadiisa.
Tani waxaa ay sii xoojinaynaa khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac ee ku salaysan labada mas’uul oo ku kala afkaar duwan ka gudubka xilliga kala-guurka ah ee hay’adaha dawlada, walow lagu macneeyey nin tooxsi iyo damac siyaasadeed oo u dhexeeya labada Shariif in ay sal u tahay khilaafaadka golayaasha dawlada, aanuse ahayn mid siyaasadeed ama sharci.
M/weyne Shariif iyo xulufadiisa ayaa qaba in golayaasha dawlada xil-kororsi loo sameeyo, ayna iyagu dalka ka saaraan, kana saari karaan xilliga kala-guurka ah – Sh. Shariif sinaba u dooni maayo in hoggaanku uu gacantiisa ka baxo, xulufadiisana seeraha laga saaro; Xukuumada oo taa ka duulaysa ayaa soo jeedisay in xil-kororsi sannad ah loo sameeyo hay’adaha fulinta, kuna gacan-sayray xil-kororsigii 3-da sano ahaa ee baarlamaanka; tani ma aanay cajabin hoggaanka iyo mudanayaasha baarlamaanka oo u fasirtay in la baal maray.
Afhayeen Shariif Xasan iyo xulufadiisa ayaa qaba fikir nuxurkiisu yahay in doorashooyin baarlamaani ah la qabto, lana doorto madaxda hoggaamin doonta dawlada federaalka ah – waana sida keliya ee ay qabaan in ay ku hanan karaan hoggaanka dalka; Mudanayaasha baarlamaanka oo taa ka shidaal qaadanaya ayaa 3 sano oo xil-kororsi ah samaystay bilawgii sannadkan; tani ma aaanay raali gelin madaxweynaha iyo xukuumada.
Safaaradaha dalalka daneeya arrimaha Somaliya ee fadhigoodu yahay Nairobi iyo xafiiska UN-ta ee qaabilsan siyaasada Somaliya oo hore u maarayn jiray khilaafaadka madaxada dawlada ayaad moodaa in ay hadda faraha ka laabteen, walow la arko in ay sheedaa ka daawanayaan, sugayaana inta xeedho iyo fandhaal kala dhacaan si ay deetana ugu sahlanaayo in toodu ay aakhirka u meel marsto.
Shirkii Jibuuti ee Janaayo 2009 ee lagu doortay M/weyne Shariif ayaa xil kororsi 2 sano ah loogu sameeyey golayaasha dawlada.
Xilka madaxda iyo xilliga hay’adaha dalwada federaalka ah ayaa ku eg 20-ka bisha Ogoosto, 2011.
Ciidamada dawladda federalka oo ku hareeraysan suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo dagaal halkaasi ka socda.